Ukuveliswa kwemigca emincinci yokuvelisa ukutya kwenkukhu
Iipellets zokutya kweenkukhu zenziwa ngezinto ezahlukeneyo ,Ukudityaniswa kwezixhobo ezahlukileyo zokupheka kunokuhlangabezana neemfuno zeenkukhu zezondlo ezahlukeneyo.
Ukutya okuluhlaza kusetyenziselwa ukongeza ukusilela kweevithamini, Ngokubanzi ayingaphezulu kwe 30% kumxholo womxube .uchaphazela imifuno eluhlaza emitsha,iiakhawunti ze-alfalfa 20% ukuba 30% womxube, amahlamvu aluhlaza asetyenziswa ngokufuthi njengamagqabi embewu, amagqabi emisonto emsi,yiakhawunti 5% ukuba 10% kumxube.
Iprotheni yokutya kubhekisele koku kutya yiproteni yomyinge wama-30% epesenti, ihlala icacisa 5%-30% womxube. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokutya okuqhelekileyo kweprotein, enje ngekhekhe lokubhaka kunye necephe lekhekhe,ikhekhe lesoya kunye necekecwana lepheki.which inokwenza iakhawunti 10% ~ 20% kumxube. Xa kuthelekiswa nesidlo seentlanzi, eluhlobo lokutya okuphezulu kweprotein kwezilwanyana, sinokongeza 5% ~ 15% kumxube. Ikhekhe le-Cottonseed lihlala lisongeza ngaphantsi 7% kwesidlo esixubileyo kuba iityhefu.
Amandla atya njengombona, ingqolowa, irhasi kunye nesisu 45%-70%, 5%-30%, 15%-20% kwaye 10% ngokulandelelana. Ngokuphathelene nerayisi, ihlala isetyenziswa njengesijobelelo, ukongezwa ngokubanzi akukho ngaphezulu kwe 8% kumxube.
Ezi zixhobo zingasentla zokuthengiswa kweenkukhu zifuneka lula kwaye ixabiso eliphantsi.xabiso liya kuba phezulu kakhulu ukuba uthenga iipellets zokutya kwimarike.. Okuchasene, Kubiza ixabiso eliphantsi kwaye kulula ukuyithenga umgca wokuvelisa omncinci ukwenza i-pellets yokutya kweenkukhu.
Ikhaya lisebenzisa umgca omncinci wokuveliswa kwemveliso yokutya 3 Ubuchwephesha,Umatshini wokudibanisa omnye kunye nomatshini odibeneyo, isixhobo esinye sokuhambisa kunye nomatshini omnye wepellet. Inokugqiba ukugaya, ukuxuba, ukuveliswa kwemveliso ye-pellet.this pellet mill yemigangatho inganciphisa ukusetyenziswa kwabasebenzi kude kakhulu. Iipellets ezenziwe ngumtya wemveliso yokutya enomphezulu ogudileyo, Ubunzima obulungeleleneyo, ukukhula ngaphakathi, nayo inokubulala iintsholongwane kunye nezinto ezihlaselayo. Into ebaluleke kakhulu kukuba umgangatho wokutya ucocekile kwaye ucocekile. Ayisiyiyo kuphela eyanelisa iimfuno zesondlo senkukhu, kodwa kwakhona unokunciphisa ngokufanelekileyo iindleko zokondla.